नेकपा एकता : माधव नेपाललाई पेलेरै अघि बढ्ने ओली–प्रचण्डको तयारी
बैशाख ३, काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता टुंगो लगाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सोमबार छलफल भएको छ ।
आजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा तल्लो तहको कमिटी टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति जुटेन । वरिष्ठ नेता नेपालले मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया र आधारका विषयमा नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले वैशाखको पहिलो साताभित्रै सबै कमिटी टुंगो लागिसक्ने बताए । शीर्ष नेतृत्वबीच आन्तरिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले अब ढिलोमा ९ वैशाखभित्रमा एकता टुंगो लाग्ने बताए ।
‘शीर्ष नेतृत्व आन्तरिक गृहकार्यमै हुनुहुन्छ । अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘ढिलोमा ९ वैशाखभित्रमा टुंगो लगाएर घोषणा हुन्छ ।’
एकता टुंगोमा भइरहेको ढिलाइले त्यसको प्रभाव पार्टीका साथै सरकार सञ्चालनमा समेत भइरहेको छ । पार्टीको बैठक, प्रशिक्षण, भेलालगायतका गतिविधि अहिले शून्यजस्तै भएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँट एवं एकता टुंगो लाग्न नसक्दा नेता कार्यकर्ता नै बेरोजगार भएका छन् ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले एकता टुंगो लाग्नमा पार्टी नेतृत्वको कमजोरी रहेको बताए । नेतृत्वको ढिलाइकै कारण समयमा टुंगो लाग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई मिलाएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
‘नियतवश मापदण्ड, प्रक्रिया, विधि र आधारविपरीत टुंगो लगाउने प्रयास भए त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ,’ खतिवडाले भने, ‘सबैलाई मिलाएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ, एकताको नाममा नियतवश प्रक्रियाविपरीत काम भए पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम मात्र हुन्छ ।’
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले भए सहमतिमै नभए पेलेरै भए पनि नेतृत्वको घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि नेता नेपालको समूहले विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, वरीयता एवं क्रियाशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलगायतका नेताले समेत यही सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय गठन भएको एकता कार्यदल विघटन गर्दै सचिवालय कमिटीले अध्यक्षद्वयलाई प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही जिम्मेवारीअनुसार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सचिवालयका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी भागबन्डाकै अनुपातमा जिल्ला नेतृत्वको बाँडफाँट टुंगो लगाउने समझदारीअनुसार तत्कालीन एमालेले करिब ४५ र माओवादी केन्द्रले ३२ जिल्लाको नेतृत्व लिने तयारी गरेको छ । जसअनुसार पूर्वएमालेले पाउने नेतृत्वमा आफ्नो समूहलाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै नेपाल समूहले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा टुंगो लाग्ने गरी समानन्तर सूची तयार गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ३ गते मङ्गलवार
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले राखे त्यस्ताे प्रस्ताव, प्रचण्ड-माधवले दिए यस्ताे जवाफ
त्यो सिमलकाे रुखसँगै ढल्याे गुँडमा ओथारो बसिरहेको खैरो गिद्धकाे सपना
नारायणहिटी संग्रहालयको अवैध ठेक्काबाट राज्यले कति गुमायो ?
खासमा वर्षमान पुनमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या के हो ?
जब ४४ वर्षका पुरुषले १५ वर्ष केटो भन्दै विवाह गर्न खोजेपछि…